တရားမျှတမှုရရှိရေး၊ အသားရောင်ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွင်း အာရှသားချင်းတွေ ဘယ်လိုရပ်တည်မှာလဲ - Chin World
Home Opinion တရားမျှတမှုရရှိရေး၊ အသားရောင်ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွင်း အာရှသားချင်းတွေ ဘယ်လိုရပ်တည်မှာလဲ
တရားမျှတမှုရရှိရေး၊ အသားရောင်ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွင်း အာရှသားချင်းတွေ ဘယ်လိုရပ်တည်မှာလဲ
ဆလိုင်းဗန်ကျုံးလျန် (ယူကေ)၊ ဆလိုင်းဘီအေထန်း
ကျနော်တို့ လူ့ဘောင်လောကကြီးဟာ မတရားမှုများကို တွန်းလှန်ရင်း ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူ့ဘောင်ကို ရောက်ရှိဖို့အတွက် ခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်းမှာ ကြိုးစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတလော အသားအရောင်နဲ့လူမျိုး အပေါ်အခြေခံပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအတွက် ကမ္ဘာတဝှမ်း ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ လက်နက်မဲ့ လူမည်း အမျိုးသား ဂျော့ဖလွိုက် သေဆုံးတဲ့ အဖြစ်ကနေ လှုပ်ရှားမှုပိုမို ပြင်းထန်လာတယ်။ ဒီလူမျိုး လူဖြူရဲအရာရှိက ဂျော့ဖလွိုက်ရဲ့ဇက်ကို ဒူးနဲ့ ၉ မိနစ်နီးပါး နင်းထားတာ ကမ္ဘာတဝှမ်း ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာတာဟာ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကနေ မြစ်ဖျားခံလာတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သေဆုံးတဲ့သူအတွက် တရားမျှတမှုရရှိရေး၊ လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းတွေအတွက် တန်းတူညီမျှရရှိရေး၊ နှင့် အသားအရောင်ခွဲခြားမှု ပပျောက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာတဝှမ်း ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလှုပျရှားမှုမှာ အမရေိကနျနိုငျငံရောကျ အာရှသားတှေ ဘယျမှာရပျတညျကွတာလဲ ဆိုတဲ့ အကွီးအကယြျ မေးခှနျး ထှကျလာပါတယျ။ သခြောတာကတော့ အမရေိကရောကျ ခငြျးလူမြိုးတှအေမြားစုကတော့ လူဖွူလူမြိုးကွီးဝါဒ၊ လူဖွူအစှနျးရောကျဝါဒီကိုငျစှဲတဲ့သူတှနေဲ့ တသံတညျးထှကျပွီး ဆန်ဒပွတဲ့သူတှကေို ပွစျတငျ ဝဖေနျရှုတျခကြွတာတှေ့ရတယျ။ လူမညျးတှကေိုနှိမျ့ခတြဲ့ မှတျခကြျမြိုး ဗွောငျတငျကွတယျ။ လူဖွူအစှနျးရောကျဝါဒီ တှရေဲ့ တုနျ့ပွနျခကြျတှေ ကူးယူ၊ မြှဝနေကွေတာတှတှေေ့ရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခငြျးလူငယျတစု ကတော့ ဒီဆန်ဒပွပှဲမှာ အမရေိကနျရောကျ လူနညျးစုအသိုငျးအဝိုငျးနဲ့အတူ ရပျတညျပွီး ဆန်ဒပွကွတဲ့ဟာလေး တှေ့ရတာ အားတကျစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကိုရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျး ၀ဖေနျတာတှေ့ရတော့ စိတျမကောငျးပါဘူး။ တကယျတမျးတော့ အခုလိုမြိုး လူမညျးတှေ ဆန်ဒပွလှုပျရှားမှု (Civil Right Movement) ကွောငျ့ အစိုးရကို ဖိအားပေးပွီး ဥပဒအေသစျတှေ ထှကျပေါျလာနိုငျတာဖွစျတယျ။ ဒီလှုပျရှားမှုမြိုးမြားကွောငျ့သာ အာရှနိုငျငံ၊ အာဖရိက စတဲ့နိုငျငံတှကေ လူတှေ အမရေိကနျနိုငျငံကို အခွခေနြထေိုငျခှငျ့လညျး ရခဲ့ခွငျးဖွစျတယျ။ ယနေ့ ကလေးတှဟော လူဖွူတှနေဲ့အတူတူ အဆငျ့အတနျးတူ ကြောငျးတကျနိုငျခဲ့ရခွငျးဖွစျတယျ။
အခုဒီပြသနာဖြစ်တော့ အာရှသား တော်တော်များများအတွက် လူဖြူနဲ့လူမည်းအကြားသာဖြစ်တဲ့ ပြသနာလို့ ထင်မှတ်ကြတယ်။ အမေရိကန်ရောက် လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းတွေဆီမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ပြသနာလို့ အများစု မမြင်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ချင်းတွေတင်မကဘဲ အာရှသားတွေဟာ နိုင်ငံရေးဘက်မှာ ပါဝင်မှုတော်တော်လည်းအားနည်းတယ်ဆိုတာ အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုဘဲ ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးဘက်မှာ ပါဝင်ခြင်း စိတ်ဝင်စားခြင်း အားနည်းတော့ ကျွန်တော်တို့ သိတဲ့ဟာတွေလည်း များများစားစား မရှိနိုင်တော့ဘူး။ ပြသနာ တခုဖြစ်ပြီဆိုရင် အဲဒီပြသနာရဲ့ အရင်းအမြစ် (သို့) အဲဒီပြသနာအကြောင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မသိနိုင်တော့ဘူး၊ ကိုယ်သိတဲ့ အချက်တချက် နှစ်ချက်လောက်ပေါ်မှာ ရပ်တည်လေ့ရှိကြတယ်။ အာရှသားတွေလည်း လူဖြူလူမျိုးကြီးဝါဒ (white supremacy) စွဲကိုင်တဲ့သူ တွေရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ခံနေကြပါတယ်။ ဥပမာ .. လုန်ငန်းခွင်ထဲမှာ .. အလုပ်လျှောက်တဲ့အချိန် .. .. အိမ်ဌားတဲ့အချိန် . အစရှိသဖြင့်. လူမည်းတွေလောက်တော့ ဆိုးဆိုးရွားရွား ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း တော့မခံရဘူး။
အာရှသားတယောက်လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင် လူမည်းတွေလို ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေလို့ အထင်မခံရပေမယ့် ခွဲခြားမှုတော့ ရှိပါတယ်။ လူမည်းတွေတော့ ရက်ရက်စက်စက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရတာ ရဲတွေလက်ထဲမှာ သေတာ .. ရဲတွေ သူတို့အပေါ် အင်အားအဆမတန်သုံးတာ နှစ်တိုင်း လိုလို တွေ့ရတယ်။ အမေရိကနိုင်ငံမှာ လူမည်းဖြစ်ရုံနဲ့ အသတ်ခံရတဲ့သူတွေအများကြီး .. ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး .. အပြစ်မဲ့ .. လက်နက်မဲ့ ဖြစ်နေလျက်ပါရက်နဲ့ အသတ်ခံနေရတဲ့သူတွေ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အများကြီးပါ။ လမ်းလျောက်နေတာကို ရာဇဝတ်ကောင်ထင်ပြီးတော့ ပစ်သတ်တာ။ ကိုယ့်အိမ်မှာအိပ်နေတာကို ရဲက သူခိုးဝင်တယ် သူခိုးလို့ ထင်ပြီး ကိုယ်အိမ်ထဲကို လာပစ်သတ်တာ။ အိမ်တခါးပွင့်တာကို အိမ်ဖေါက်ခြင်းခံရတာထင်ပြီး အိမ်ရှင်ကို သွားပစ်မိတာ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းလျောက်နေတာကို ခိုးယူပြီး ထွက်ပြေးတယ်ထင်လို့ ပစ်သတ်ခံရတာ။ အမျိုးအိမ်မှာ ကလေးထိန်းနေတုန်းလည်း ပစ်သတ်ခံရတာ .. ကားမီးပျက်လို့ ရဲကတားပြီးမှ ပစ်သတ်ခံရတာ .. ပစ္စည်းရောင်းနေတုန်း ပစ်သတ်ခံရတာ .. အစရှိသဖြင့်ပေါ့ .. ဘာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ လက်နက်မဲ့ .. အပြစ်မဲ့တဲ့ လူမည်းတွေအသတ်ခံနေရတာတွေအများကြီး .. ရဲလက်ထက်မှာ အင်အားအလွန်အကျွန်သုံးစွဲမှုကြောင့် အသက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လူမည်းတွေ အများကြီး .. ဒါတွေကျူးလွန်တဲ့ ရဲတွေ အပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာ ရှားမှရှား .. ဒါတွေကြောင့် တရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက် ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်တယ်။ ဂျော့ဖလွိုက် ရုပ်သံမှာလည်း အသက်ရှူလို့မရဘူး လို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့် … အသက်ထွက်သွားတဲ့အထိ ဒူးလွတ်မထားဘူး။ သူ့ကို ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နေမှန်းလည်း သိပါလျက်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အသက်ပျောက်တဲ့အထိ ဆက်နင်းထားတာ အင်မတန် တုန်လှုပ်စရာ ကောင်းပါတယ်။
ဒီနေရာမှာသာ လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်း (Ethnic Minority) တယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးတော့ ရှိစေချင်တယ်။ တကယ်လို့များ ဂျော့ဖလွိုက် နေရာမှာ ချင်းလူမျိုးတယောက်သာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် အာရှသား တယောက်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင် ချင်းလူမျိုးတွေ အာရှသားတွေ သူတို့ ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက် အခုလို ရပ်တည်ကြမလား။ အားလုံး (သို့) လူများစု ငြိမ်နေမှာ တော့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း သေချာတယ် ….. နိုင်ငံခြားရောက် ကျွန်တော်တို့ အာရှသားတွေရဲ့ ခံယူချက် “သူများနိုင်ငံမှာ နေရတာ .. အမြဲခေါင်းငုံ့ပြီးငြိမ်ငြိမ်နေပါ … မတရားတာတွေ့လို့ရှိရင်လည်း ခင်ဗျားနဲ့ မဆိုင်ဘူး … ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မတရားလုပ်တာ ခံရရင်လည်း သူများနိုင်ငံမှာ နေရတာလေ .. ဒါလေးတော့ ပေးဆပ်သင့်တာပေါ့ .. ဒါတွေသွားလုပ်လို့ရှိရင် ကိုယ်မှာဘာဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောက်တရား အမြဲရှိကြတယ်။ ဒီလိုအကြောက်တရားကိုလက်ခံပေမယ့် တရားမျှတမှုအတွက် သူများတွေ တောင်းဆိုနေချိန်မှာ လူဖြူလူမျိုးကြီးဝါဒ ကိုင်စွဲပြီး သူတို့နဲ့ ပခုံးချင်းယှဉ်ပြီး ရပ်တည်နေတာတွေတော့ လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူး။ ဒီလူတွေအများစု ဟိုအုပ်စုက နှိပ်စက်ပါတယ်၊ ဒီအုပ်စုက နှိပ်စက်ပါတယ်၊ ဆိုတဲ့ မတရားမှုကြောင့်သာ သူတို့ အမေရိကန်ကို ဒုက္ခသည်အနေနဲ့ ရောက်ရှိနိုင်တာ အားလုံးအသိပါ။
လူဖွူလူမြိုးကွီးဝါဒ အထငျကွီးမှု .. လူမညျးမုနျးတီးမှုတှကွေောငျ့ အမရေိကနျ ရောကျတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လူနညျးစုအသိုငျးအဝိုငျးအုပျစု (Ethnic Minority) ထဲကတစုလို့ မမွငျနိုငျတော့ဘူး .. လူဖွူလူမြိုးကွီးတှရေဲ့ လှှမျးမိုးတဲ့အတိုငျးဘဲ အသံထှကျလာကွတော့တယျ။ မတရားတဲ့လုပျရပျအတှကျ မတရားခံရတဲ့ လူနညျးစုအသိုငျးအဝိုငျးတှေ ဆန်ဒပွ တောငျးဆိုနခြေိနျမှာ .. မတရားတဲ့ ဥပဒကေို မငျးတို့ ဘာလို့ လကျမခံနိုငျတာလဲ ဆိုတဲ့ သဘောသကျရောကျနပေါတယျ။ အာရှသားတှလေညျး လူမညျးတှကေို လူဖွူတှေ အမွငျနဲ့ မွငျနကွေတာတှေ့ရတယျ။ လူမညျးအသတျခံရပွီဆိုရငျ ဘယျလိုသသေေ .. သူဘာလို့ရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့အမေးခှနျးနဲ့ … ခံရသူအားနညျးတဲ့သူရဲ့အပွစျကိုပုံခလြေ့ရှိကွတယျ။ လူမညျးတှကေို စိတျထဲမှာ ရာဇဝတျကောငျ (criminal and thugs) လို့မွငျကွတယျ၊ ငါတို့အာရှသားတှလေညျး ဒီနိုငျငံမှာလာပွီးတော့ ကိုယျ့ခွထေောကျပေါျရပျတညျနိုငျတာဘဲ .. သူတို့ကောဘာလို့ မလုပျနိုငျတာလညျး ဆိုတဲ့ တုနျ့ပွနျခကြျတှလေညျး တှေ့ရတယျ။ ခမြျးသာတဲ့သူတှေ အမွဲပွောသလိုပေါ့ ငါလညျး သုညကနစေခဲ့တာ ဆငျးရဲ့တဲ့သူတှေ ဘာဖွစျလို့ငါ့လို မအောငျမွငျနိုငျတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးလိုမြိုးပေါ့။
ရဲပစ်သတ်တဲ့ လူမည်းတွေ .. ရဲလက်ထဲမှာ သေဆုံးတဲ့ လူမည်းတွေ ကြည့်လို့ရှိရင် လူမည်းဖြစ်ရင် အခြားလူမျိုးတွေထက် ရဲလက်ထဲမှာ သေဆုံးဖို့ ရာနှုန်းပိုများတယ်။ ဒါဟာ လူမည်းတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံလို့ဖြစ်ပါတယ်။.. အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ ရဲတွေကိုလည်း တရားစွဲဆိုခြင်းနည်းပါးတော့ .. ခံရတဲ့သူတွေအတွက် တရားမျှတမှု .. အသားရောင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တွေပပျောက်စေဖို့ တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်တယ်။ လူမည်းတွေဟာ ကျွန်ဘဝနဲ့ အမေရိကကို ရောက်ရှိလာကြတယ်။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်အပြီး ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းတဲ့ အချိန်မှာလည်း သူတို့ဟာ Lynching လို့ခေါ်တဲ့ လူဖြူအုပ်စုကနေ တရားစီရင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့ Separate but Equal ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ လူမည်းတွေ သီးသန့် ခွဲထားခဲ့တယ် .. အဲဒီလိုမျိုးမတရား .. တရားမျှမှုမရှိတဲ့ အဖြစ်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့ Civil Right Movement စတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒီ Civil Right Movement ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ဒီကနေ့ အာရှသားတွေအပါအဝင် လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းတွေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အကျိုးခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့လိုမျိုး တချိန်ကလူမည်းတွေလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အရာတွေ ဒီကနေ့ အာရှသား တွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်မှတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ လူမည်းနဲ့အာရှသားတွေအပါအဝင် လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းအားလုံး Civil Right Movement ကြောင့် ယနေ့အကျိုးခံစားတဲ့အရာတွေထဲက အဓိကအချက်တွေကတော့:
✊🏽The Immigration and Nationality Act ထွက်ပေါ်လာတယ်။ ဒီဥပဒေကြောင့်သာ အာရှသားတွေ၊ ချင်းလူမျိုးတွေ ယခု အမေရိကန်မှာ ဝင်ရောက်အခြချခွင့်ရပြီး မိသားစုတွေလည်း ခေါ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။
✊🏽Voting Rights Protection: ဒီဥပဒေကနေ ယနေ့အာရှသားတွေ မဲပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ကို အကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။
✊🏽Ending bans on interracial marriage (Loving Vs Virginia)။ အဲဒီ Civil Right Movement ကြောင့် ယနေ့ လူလူခြင်း၊ အသားအရောင်ခြင်း ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ မည်သူမဆို ချစ်ကြိုက် လက်ထပ်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်။
✊🏽နေရာအကန့်အသတ်မရှိအိမ်ဝယ်နိုင်ခြင်း (Shelley v. Kraemer, 1948)။ ဒီဥပဒေကြောင့်လူဖြူမဟုတ်တဲ့သူတွေလူဖြူတွေနေတဲ့ရပ်ကွက်မှာအိမ်ဝယ်လို့ရလာတယ်။ဒီဥပဒေမတိုင်ခင်မှာလူဖြူတွေနေတဲ့ရပ်ကွက်မှာလူဖြူမဟုတ်သူတွေအိမ်ဝယ်ခွင့်မရခဲ့ပါ။
✊🏽လူခြင်းခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်တက်ခွင့်ရခြင်း (Brown v. Board of Education, 1954) ဒီဥပဒေကြောင့် လူဖြူနဲ့ အခြားလူမျိုးတွေ ကျောင်းအတူတူတက်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြတယ်။
ဒီကောင်းကြိုးတွေဟာလူမည်းတွေရဲ့အသက်၊သွေး၊ချွေးနဲ့ရင်းပြီးမှရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်၊လူမည်းအုပ်စုအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ အခြားလူနည်းစုအုပ်စု (Ethnic Minority) အသိုင်းအဝိုင်းတွေအတွက်လည်း သူတို့ တခါတည်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ သူတို့ အသက်၊ သွေး၊ ချွေးတွေ ရင်းခဲ့တာတွေရဲ့အသီးအပွင့်တွေကို အခုချိန်မှာ စားနေပြီးတော့ သူတို့ရုန်းကန်ခဲ့ရအချိန်တွေ သူတို့လှုပ်ရှားမူတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မမြင်နိုင်တာဆိုးပါတယ်။
အမေရိကန်သမိုင်းမှာကျွန်စနစ်ကနေနေယနေ့အချိန်အထိအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့်ကျန်ရှိနေသေးတာက အသားအရောင်နဲ့လူမျိုးခွဲခြားမူဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကပြောတယ်။ လူမည်းတွေထဲကနေ သမ္မတတောင်ဖြစ်လာတာပဲတဲ့။ လူမည်းတွေထဲကချမ်းသာသူတွေ ထွက်လာတာပဲတဲ။ ဘာလို့ဒီထက် ပိုလိုချင်တာလဲလို့မေးကြတယ်။ မေးတဲ့လူတွေထဲမှာ မြန်မာပြည်မှာတန်းတူညီမျှရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတချို့လည်း ပါနေတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ချင်းလူမျိူး/ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ဦး ဒုသမ္မတရာထူးရတာနဲ့ ချင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး ၊လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေအားလုံး မျှတမူရသွားပြီလား ၊ရမရ မြန်မာပြည် သတင်းတွေက ဖော်ပြနေပါတယ်။ လူမည်းတွေ လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းတွေ အခု ပိုတောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ တန်းတူညီမျှရေးအတွက် တောင်းဆိုလှုပ်ရှားနေကြတာပါ (They are not asking for more, They are asking to be Equal).
တချို့က #blacklivesmatter အောက်မှာ #Alllivesmatter လို့ တုန့်ပြန်ကြတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုခြင်းအားဖြင့် လူသားအားလုံး (လူမည်းအပါအဝင်) ရဲ့အသက် အရေးကြီးတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပေမယ့် .. #Blacklivesmatter အောက်မှာ #Alllivesmatter လို့ သွားတုန့်ပြန်တော့ အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ်ကောက်လို့ မရဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်စေတယ်။ တုန့်ပြန်တဲ့သူတွေလည်း ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဒီလိုတုန့်ပြန်ခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့အသက် ဘာမှအရေးမပါဘူး၊ သူတို့ရဲ့ပြသနာ ဘာမှအရေးကြီးဘူးလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ တန်းတူညီမျှမှုလည်းရှိပြီးသား၊ အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေ လူမည်းတွေမတရား ခံနေတဲ့အရာတွေ ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။
လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်း ခံရတဲ့အချိန် .. တန်းတူညီမျှမှု .. အသားရောင်ပေါ် မူတည်ပြီး လူမျိုးခြားခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ .. လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းထဲက ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးရှိကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဒါကြောင့် မတရားမှုများကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ တွန်းလှန်ဆန့်ကျင်ရင်း ပိုမိုလှပတဲ့ လူ့ဘောင်လောကကို မျှော်မှန်းရင်း ရပ်တည်ရှင်သန်ကြပါစို့လို့လည်း ကျနော်တို့ရဲ့ အမြင်ကို ဖလှယ်ရပါတယ်။
Previous post မင်းတပ်တွင် ပြည်ပပြန် Quarantine ဝင်ရသူများ ကိုယ့်စရိတ်နှင့်ကိုယ် နေရဟုဆို
Next post မတူပီမြို့ရှိ Quarantine ဝင်သူများအတွက် ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၏လစာထဲမှ ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်ဟုဆို
စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့် ပလက်ဝတွင် ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုသူ ပျက်ကွက်မှုအများဆုံးဖြစ်